Ugu Fiican iPad Pro 11 2021 3aad Qarniga 3aad Kiiska Funda oo leh Dabool haysta qalin qori u leh iPad Pro 11 2020 2018 Soo saare iyo Warshad | Socodka
Wixii loogu talagalay iPad Pro 11 2021 3rd Generation Case Funda oo leh Daboolka haysta qalinka iPad Pro 11 2020 2018
Kiiskani wuxuu ku habboon yahay iPad Pro 11 2021 3rd Generation, iyo labadaba iPad pro 11 jiilka 2aad 2020, ipad pro 11 2018.
iPad pro 11 jiilka 2aad 2020 Model: A2228, A2068, A2230, A2231
iPad pro 11 2018 Qaabka: A2013, A1934, A1980, A1979
Qalabka lagu Dhejiyay Qalabka Qalinka
La jaanqaadi kara qalin qalin kala duwan iyo qalinka Apple qalinka 1aad iyo 2aad iyo kaabayaasha. Qalabka qalinka lagu dhejiyay wuxuu siiyaa meel aamin ah oo wax ku ool ah oo lagu keydiyo qalinkaaga.
Ku taageer qalin qalinka aad kudejiso wireless wireless isla waqtigaas.
Toos / hurdo smart
Kaysku wuxuu kuu ogolaanayaa aaladdaadu inay isla markiiba tooso oo ay hurdooto markay furayso iyo markay xireyso. Haddii aad dejiso erey sir ah si aad u furto, markaad furto daboolka, shaashadda ayaa kaliya iftiimin doonta.
Istaagida Taageerada Laaban karo
Mawqifka seddex geesood ee magnetic wuxuu taageeraa habka daawashada raaxada leh iyo qaabka qoraalka oo deggan. Waxaad si sahal ah ugu laaban kartaa daboolka meelo kala duwan si aad ugu abuurto istaag akhris, daawasho, teeb gareyn.
Iyada oo leh barkinta shilalka ka hortagga-daadinta, waxay yareyn doontaa xoogga saameynta waxayna yareyn doontaa dhaawaca qalabka.
Afarta dhinac, muraayada iyo shaashaddu waxay leeyihiin nashqad ilaalin ah, sidaa darteed ha ka welwelin inaad xoqdo ipadkaaga ama hoos u dhig ama kuus.
Sax goynta dhammaan marinnada iyo dekedaha.
Qolofta dambe ee jilicsan
Waara, xoqida u adkaysata oo si sahlan loo rakibo. Jilibka jilicsan ee 'TPU' dhabarka dambe oo leh sii deynta naqshada kuleylka ayaa ka caawinaya ipad-kaaga sii deynta kuleylka. Ha ka welwelin ipad-kaaga inuu aad u kulul yahay marka aad ciyaareyso ama aad filimmo daawaneyso muddo dheer.
Dhabarka jilicsan ee waara ee tayada sare leh ee maqaarka PU. Dareenno taabasho wanaagsan.
Gudaha microfiber-ka xoqan oo jilicsan ayaa ku daraya raaxo iyo lakab difaac dheeri ah.
Waxay hubisaa in aad ipad cusub dabool si dhow, si aad kiniinkaaga uga ilaaliso xagashada, naxdinta iyo kuuskuusyada.
Dhererka x Width x Qoto dheer: 253m x 154mm x 15 mm
MOQ: 50PCS / midab Shahaadada: FCC, ROHS, GS, RECH, Sgs
Baaxadda: 11 ”Naqshadeynta: Kiish qalin lagu jiifiyo
Xirxirida: opp bag Payment: 1.T / T 2.Warqadda Midoobey 3. Paypal
Wakhtiga la bixinaayo: Wakhtiga la bixinayo: 3-5 maalmood oo shaqo
Magnet Seex / Soo-kac: Haa Magnet-ka oo Xidhan: Haa
Hore: Wixii Samsung galaxy tab A7 lite 8.7 inch 2021 Funda Tablet Case Magnetic Slim Folio Leather Cover
Anti-fall Case Shockproof for Samsung galaxy ta ...
360 wareegaayo Duty culus Case Shockproof Gawaarida ...
Universal folio kiis la Bluetooth-saari karo k ...
U istaag kiiska maqaarka ee Samsung galaxy tab a 10 ....
Kiiska kumbuyuutarka taabashada ee iPad 10.2 2020 2019 ...